कोह रोंग सम्लोम 2017 - नयाँ पसलहरु, नयाँ रिसोर्ट्स र न्यू टूर
Koh Rong Samloem 2017 - नयाँ पसलहरू, नयाँ रिसोर्ट्स, र नयाँ टूरहरू
बितेका6महिनाहरूमा वा त्यस्ता त्यहाँ केही नयाँ नयाँ घटनाहरू छन् Koh Rong Samloem तपाईं यो अद्भुत टापु भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बारे जान्नुपर्छ।
सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ कि त्यहाँ केही पसलहरू छन् Saracen Bay (नमूने मा मुख्य पर्यटक क्षेत्र)। पसलहरू निकै सानो हुन्छन् तर मच्छर स्प्रे, सूर्य तन लोशन, नाश्ता, अल्कोहल र सिगरेट जस्ता चीजहरू बिक्री गर्छन्। मूल्यहरू सिहानकुकिले तुलनामा फ्याप्चर गरिएको छ, तर यदि तपाईं बाहिर चलिरहेको वा केही चीज तपाईंसँग ल्याउन बिर्सनुभयो भने केहि चीजहरू खरिद गर्ने विकल्प राम्रो छ। यो कपाल कचौरा पनि सम्भव छ र तपाईंको नाकहरूलाई सानो सौन्दर्य सैलूनमा छेउमा पुग्न सम्भव छ!
पसलहरु संग मेरो मात्र मुद्दा यो हो कि उनि एकदम अजीब दिखछन र वास्तव मा द्वीप को सुंदरता संग फिट नहीं हो - उनि ठूलो धातु संरचनाहरु जो एक गले अंगूठे जस्तै खडा हो! तर अझै, यो केहि समय पछि सामोममा हराएको छ र धेरै मानिसहरू उनीहरूको सराहना गर्नेछन् म निश्चित छु। विशेष गरी, स्थानीय खमेर कर्मचारीले अन्ततः उनीहरूको आवश्यकतालाई खरिद गर्न एक स्थान छ, वा बस बियर को लागि प्रीमियम तिर्न बिना आफ्नो खाली समय आराम र आराम गर्न को लागी।
कोह रोंङ्ग सामोममा अर्को ठूलो विकास सरसेन खाडीमा3नयाँ रिसोर्टहरू खोलिएको छ। धेरै सुन्दर समुद्र तट अब कब्जा छ, तर जस्तो पाइप्स रिजर्ट प्रदर्शन, तपाईं पनि सानो भन्दा सानो बिट संग धेरै गर्न सक्छन्।
यो प्रतिमात्मक रिजर्टले मलाई सानो कुरा सम्झाउँदछ चन्द्रमा, त्यसमा आवासको संरचना (यस अवस्थामा पाइप-हेर्दै) निश्चित रूपमा तपाइँले स्ट्राइक गर्दा तपाईंलाई समुद्र तटको साथ पारित गर्दछ। त्यसोभए, म चाँदनीलाई पहिलो पटक मा पाइप रिजर्भेसनको अभावमा थिएँ, तर धेरैजना मानिसहरूले यो मनपराउन लागेका हुन्छन् - म अनुमान गर्दछु किनभने कोठाहरू आफ्नै सुन्दर र आधुनिक हुन्छन्।
दोस्रो नयाँ रिसोर्ट हो लेम बीच बंगला अर्को Sol Beach Resort। यो प्रायः दुई वर्ष पहिले नै चेतावनी दिईन्थ्यो, तर यो पुन: रिबन्ड्ड र रिफर्म गरिएको छ, र नतिजाको रुपमा सुधारिएको छ। रेस्टुरेन्ट, विशेष गरी, अब एक राम्रो मानक हो।
अर्को नयाँ रिसोर्ट हो बीच पार्क - अगाडी एक अधिक रस्टिक कलम शैली आवास रयल रिट्रिट। समुद्र तट पार्कको नक्कल देखिन्छ जस्तो देखिन्छ कि रयल रिट्रिटको दृष्टिकोण केहि हद सम्म - विशेषगरि, ती बारहरू लगभग समान छन्!
Samloem मा अन्तिम प्रमुख विकास भनेको अहिले त्यहाँ एक (धेरै लोकप्रिय) टापु वरपर डुङ्गाको भ्रमण हो। धेरै स्थानहरूमा बुक गर्न उपलब्ध, भ्रमणले तपाईंलाई स्नोर्केल र माछाको अवसरको विभिन्न ठाउँहरू र प्रस्तावहरू लिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा, मलाई टापु भ्रमणहरू मनपर्छ - मलाई Koh Rong को भ्रमणको समीक्षा यहाँ.
Koh Rong » ब्लग » समाचार » Koh Rong Samloem 2017 - नयाँ पसलहरू, नयाँ रिसोर्ट्स, र नयाँ टूरहरू
19 / 03 / 2017 in विशेष लेख, खाद्य र पेय, समाचार